China Cold Therapy Sock orinasa sy mpanamboatra | Huanyi
10 taona niainana ny OEM, ODM. Afaka manome anao soso-kevitra matihanina amin'ny loko namboarina, logo, fonosana, fanampiana amin'ny famolavolana vahaolana tsara indrindra ho an'ny vokatra fanamaivanana ny fonosana mangatsiaka gel.
Ho an'ireo ba kiraro mampitony fitsaboana mangatsiaka, ny orinasanay dia manana habe sy safidy loko isan-karazany, ohatra ny manga-ranomandry, manga tiffany, volomparasy, mavokely, maitso, mainty. Izahay dia manana ny fanao amin'ny fehin-kibo fotsy na mainty misy velcro, soso-kevitra fonosana maro be ho safidinao.
Mora ampiasaina ny ba kiraro fitsaboana mangatsiaka ho an'ny fikarakarana tongotra: Tsotra sy mahomby, ny ba kiraro fanavanana misy fonosana gilasy dia vahaolana fitsaboana mangatsiaka ao an-trano hahitana fanamaivanana ao anatin'ny minitra vitsy. Azonao atao ny mampiditra endrika fonosana gel misy na tsy misy tsipika fanerena, eo ambanin'ny fanandramana faneriterena 150kgs ary alao antoka fa tsy misy misy fivoahana.
Manaraka: mite ranomandry
Kitapo gilasy fitsaboana amin'ny tongotra
Fonosana gilasy ho an'ny tongotra